श्रीमती र प्रेमिकालाई एउटै ओछ्यानमा सुताउने यी पुरुषलाई हेर्नुस, कति सम्म हेप्न सकेको?(भिडियो हेर्नुस्) – Ramailo Sandesh
श्रीमती र प्रेमिकालाई एउटै ओछ्यानमा सुताउने यी पुरुषलाई हेर्नुस, कति सम्म हेप्न सकेको?(भिडियो हेर्नुस्)
काठमान्डौ ,२५ चैत । सुर्खेत निबासी जानकी सरु मगर र दाङ निबासी दिल बहादुर घर्ति मगर बीचमा प्रेम भयो । यस्तो प्रेम जुन अबैधानिक भयो किनकी दुवै बिबाहित थिए । जानकी दुई छोरा छोरिकि आमा थिइन् र दिल बहादुर बाल बच्चाका बुबा थिए । उनीहरु आपसमै घरबारे थिए तर उनीहरु बीचमा अ नै ति क प्रेम भयो ।
जानकी दिल बहादुरको घरमा आउने जाने गर्थिन। उनीहरु बीच सम्बन्ध छ भन्ने कुरा घर परिवार र समाजलाई थाहा थियो तर अहिले एका एक दिलबहादुर र जानकी अहिले हराएका छन । आज जानकीका श्रीमान र दिलबहादुर कि श्रीमती एकै साथ मिडियामा आएका छन् । दिलबहादुर र जानकी को अंकल विदेश रहदा साथी रहेको र विदेश बाट फर्किएर आए पछी आफ्नो साथीलाई भेट्न जान्छु भन्दै दिलबहादुर सुर्खेत गए ।
४ दिन त्यही बसे र त्यहा बाट फर्किदा दाईहरु संगै जानकी पनि आएकी रहेछिन त्यसपछी अब विदेश न जाने भनेका दिलबहादुर सुर्केत पैसा कमाउन जान दिने भए जान्छु नत्र अरु कतै न जाने भनेर श्रीमानले भनी सकेपछी घरमा १ रुपिया पैसा नहुदा श्रीमतीले आफ्नो माईतको गाग्री बेचेर पठाएको बताउछिन ।
मैले कहिले सोचेको थिइन्नन श्रीमानले यस्तो गर्लान भनेर अब सुख पाउने बेलामा मैले आसुका ढिका खसाल्दै हिड्नु परेको छ भन्दै रूदै दुःख पोख्नकै लागि आइन मिडियामा ।